वार्ता – Himalaya Television
सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ता आज, विप्लव समूहले राख्यो यस्तो दुई शर्त
१९ फागुन २०७७ काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच आज पहिलो चरणको वार्ता हुने भएको छ। तर वार्ताको समय र स्थान भने गोप्य राखिएको छ । वार्तामा बस्नका लागि विप्लव नेकपाले दुईवटा शर्त...
प्रतिबन्धित नेकपा सरकारसँग वार्ताका लागि तयार, विप्लव भन्छन्–राज्यको धारणा प्रष्ट होस्
८ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सरकारसँग वार्ताका लागि पार्टी तयार रहेको बताउनुभएको छ । विप्लवले वार्ताको हल्ला गरेर मात्रै नहुने भन्दै धारणा के हो भनेर सरकारलाई सोध्नुभएको छ । पार्टी...
बिना शर्त अनशन अन्त्य गर्न डा. केसीलाई सरकारी वार्ता टोलीको आग्रह
२४ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकारले २७ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई विना शर्त अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले विज्ञप्ति...
सरकारले वार्ताका नाममा अल्झाएर डा. केसीको ज्यान लिन खोजेको आरोप
२४ असोज, २०७७ काठमाडौं । डा गोविन्द केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले असोज २२ गते भएको सहमतिको प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेकाले सहमति हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । सहमतिको प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको भन्दै केसी पक्षीय वार्ता टोलीले दबाब...
डा. केसीसँग अविलम्ब वार्ता गरेर जीवन रक्षा गर्न सभापति देउवाको माग
१८ असोज, २०७७ काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले डाक्टर गोविन्द केसीका मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै अविलम्व वार्ता गरी जीवन रक्षा गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेर केसीको जीवन रक्षामा ढिलाई भए दुष्परिणाम गम्भीर हुने...
वार्ताबाटै सम्भव छ नेपाली भूमि फिर्ता पाउन ? केके छन् उपाय ?
नेपाल र भारतबीच विभिन्न स्थानमा सीमा विवाद छ । कतिपय स्थानमा सामान्य छन् कतिपय स्थानमा गम्भीर प्रकृतिका विवाद छन् । भारतले एकतर्फी ढंगले सीमा अतिक्रमण गरिरहे पनि नेपाल मौन बस्दा कतिपय नेपाली भूमिमा भारतले भौतिक संरचनासमेत निर्माण गरेको छ...